I-IATO Iyakwamukela Ukuqaliswa Kabusha Kokusebenza Kwezindiza Zamazwe Ngamazwe Kodwa Ifuna Okuningi
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » I-IATO Iyakwamukela Ukuqaliswa Kabusha Kokusebenza Kwezindiza Zamazwe Ngamazwe Kodwa Ifuna Okuningi
zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
India travel international
Ngokusho kukaMnu. Rajiv Mehra, uMongameli we I-IATO: “Kuyinduduzo kithina njengoba besingenamali cishe iminyaka emi-2 edlule ngenxa yokungabikho kwezivakashi zakwamanye amazwe. Sisamukela ngenhliziyo yonke lesi sinqumo, nokho, futhi besilindelwe ngabomvu, futhi, njengoba ukungabikho kokusebenza okujwayelekile kwezindiza zamazwe omhlaba ukuvulwa kwama-visa ezivakashi, okuhlanganisa i-e-tourist visa kusukela ngoNovemba 15, akuzange kube usizo kakhulu njengoba imali yendiza ibiphezulu kakhulu. Lokhu kujwayelekile kokusebenza kwendiza kuzonciphisa izindleko zezindiza futhi kukwenze kukhange kubavakashi bakwamanye amazwe ukuvakashela e-India ukuze baphumule nezinye izimboni.
“Siphinde sanxusa uhulumeni ukuthi abheke namathuba okuphinda aqale kabusha izindiza zamazwe ngamazwe ezivela emazweni ayi-14 abevinjiwe ikakhulukazi ezimakethe zomthombo ezifana ne-UK, France, Germany, Netherlands, South Africa, New Zealand kanye neSingapore, njll. Lezi izimakethe zethu zendabuko, futhi izivakashi eziningi zakwamanye amazwe zisuka kulawa mazwe. ”
Uthe u-Subhash Goyal, uSihlalo we-STIC Travel Group wengeze ukuphawula kwakhe ngendlela yencwadi efundeka kanje:
“Izindaba ezilindelwe ngabomvu zokuqalwa kabusha kwezindiza zamazwe ngamazwe ziwumphumela womoya-mpilo emkhakheni wezokuvakasha nowokuvakasha odonsa kanzima. Emakethe ekhuphuka ngesidingo esikhulayo sokuvakasha kwamanye amazwe, kanye nemboni yezokuvakasha ebilokhu ibhuqwabhuqwa yindlala, ukuvulwa kwemizila yethu yokuvakasha yamazwe ngamazwe kuwukungenelela ngesikhathi okwakudingeka ukuze kuthuthukiswe izigidi zabantu. AmaNdiya athembele kulo mkhakha ukuze aziphilise.
“Sonke sijabule ngalesi simemezelo esihle sokuqalisa izindiza ezihleliwe zamazwe ngamazwe kusukela mhla ziyi-15 kuZibandlela, 2021. Ngeke nje siqinise umnotho waseNdiya, kodwa ngokuvuleka kwesibhakabhaka, abantu bazokwazi ukuhlangana nemindeni yabo, abazali, izingane ezihlale isikhathi eside eNdiya nakwamanye amazwe, futhi zikwazi ukugubha inkathi yamaholide ndawonye.
“Sibonga kakhulu kuNgqongqoshe Ohloniphekile Wezokundiza, u-Sh. U-Jyotiraditiya Scindia, ngemizamo yakhe yokungakhathali nokugcina izwi lakhe, anikezwe imboni yaseNdiya yokuqala izindiza ezihleliwe zamazwe ngamazwe ngenhloso yezwe elikhulu kanye nokuyisa iNdiya endaweni yayo ekhazimulayo. zezindiza izinsuku.”